Asa soratra sy kolontsaina: namoaka boky dimy i Nandrasana | NewsMada
Asa soratra sy kolontsaina: namoaka boky dimy i Nandrasana
Nitosaka tao anatin’ny fihibohana ny aingam-panahy! Lohahevitra maro izay tsy manalavitra ny kolontsaina malagasy ny voarakitr’i Nandrasana ao anatina boky dimy.
Iray amin’ireo mpikabary, mpanoratra, poeta namoaka boky maro momba ny kolontsaina sy ny zavakanto ary ny tontolon’ny fanabeazana Rabenandrasana Lalao François na i Nandrasana. Raha ny nambarany, efa nivoaka na tsy mbola eny amin’ny toeram-pivarotana aza ny boky miisa dimy, noketrehina tao anatin’ny fihibohana. Lohahevitra maromaro ny voarakitra ao anatin’ireo boky ireo.
Boky « Serasera – Fahaiza-miaina – Fahalalam-pomba » : « Tsy miaina irery ny olona ka tsy.maintsy mahay miara-monina. Misy fomba iraisana tsy maintsy arahina amin’izany. Marihina fa na ny mpanoratra ity boky ity aza, tsy afaka mihambo tanteraka fa mahatandrina ny fitsipi-piainana iaraha-monina. Koa ndeha hamantatra sy hanaja izany isika », hoy i Nandrasana, namintina ny voalazan’ny boky voalohany.
Boky « Ny tontolo iainana eto Madagasikara » : « Matoa mitranga izao fahantrana sy aretina maneran-tany izao, noho ny fahapotehan’ny tontolo iainana. Ny fanarenana sy ny fikajiana izany no laharam-pahamehana ankehitriny. « Mbola azo lazaina fa manana harena maro i Madagasikara raha ny tontolo iainana no jerena. Fantaro ary izany… », hoy hatrany ny mpanoratra namintina ilay boky faharoa. « Ireo antony efatra maha Malagasy », boky fahatelo nofintininy tamin’ny hoe: « Ny Trano – Fasana – Omby – Vary dia iankinan’ny fiainan’ny Malagasy manerana ny Nosy. Izay tokony ho fantatra momba ireo… ».
Boky fahefatra : « Kolontsaina sy Riba Malagasy », nofintinin’i Nandrasana amin’ny hoe: « Tsy mahafantatra ny maha izy azy intsony ny taranaka malagasy ankehitriny, noho ny fanatontoloana. Mila manao dian-tana isika ka ny lasa, itodihana; ny hoavy, banjinina. Ny kolontsaina no hazondamosin’ny firenena ka mila hajaina sy koloina ».
Boky fahadimy nosoratan-dRabenandrasana Lalao François: « Ny tsiambaratelon’ny Fanandroana malagasy ». « Boky tokony hovakin’ny olona rehetra. Tsy manozongozona ny finoana fa araka ny teny hoe: « Fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara ». Ataovy andram-boankazo an’ala ny zava-pantatra ka ny mamy, atelemo: ny mangidy, aloavy », hoy ny mpanoratra.
Nomarihin’i Nandrasana fa «Mbola tsy vita tonta maro fa izay liana dia manatona ny Tranombokim-pirenena Anosy sy eny amin’ny Akademia Malagasy Tsimbazaza ».